ऋणपत्र निष्कासनको तयारीमा सिटिजन्स बैंक, व्याज कति ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > बैकिङ > ऋणपत्र निष्कासनको तयारीमा सिटिजन्स बैंक, व्याज कति ?
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ ।
बैंकले १ हजार रुपैयाँ मूल्य तोकेको ऋणपत्रको भुक्तानी अवधि १० वर्ष रहेको छ । बैंकले निष्कासन गर्न लागेको ‘१०.२५ प्रतिशत सिटिजन्स बैंक ऋणपत्र २०८६’को निष्कासक तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
ऋणपत्रमा वार्षिक १० दशमलव २५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको बैंकले त्रैमासिक रूपमा यसको भुक्तानी गर्ने भएको छ । बैंकले निष्कासनको तयारी गरेको ऋणापत्रमध्ये १० लाख कित्ताबराबरको १ अर्ब रुपैयाँको सर्वसाधारणका लागि तथा १५ लाख कित्ताबराबरको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको व्यक्तिगत एवं संघसंस्थालाई बिक्री गर्ने जानकारी बैंकले दिएको छ ।
उक्त ऋणपत्रमा सर्वसाधारणले न्यूनतम २५ कित्ता र अधिकतम ३ लाख कित्ताको लागि आवेदन गर्न पाउनेछन । बैंकले व्यक्तिगत रूपमा बिक्री गरिने ऋणपत्रमा अधिकतम सीमा नलाग्ने बैंकले जानकारी दिएको छ । रेटिङ कम्पनी केयर रेटिङ नेपालले यो ऋणपत्रलाई एल बिबिबी प्लस रेटिङ दिएको छ ।
२०७६ फागुुण ९ गते ०५:५६ मा प्रकाशित
चेपे खोला जलविद्युतमा एनएमबि बैंकको लगानी
एघार यात्रुसहित गुड्यो चालकविहिन बस !
कृषि बिमाका बारेमा किसानलाई छैन जानकारी, थन्कियो १० करोड !
सेयर बजारमा आजै २५.४२ अंकको पहिरो